Na njirimara ndị Juu n'oge anyị na n'ozuzu ya - Rabbi Michael Avraham
Na njirimara ndị Juu n'oge anyị na n'ozuzu
Ụlọ akwụkwọ - 2014
"Na mberede, otu nwoke biliri n'ụtụtụ wee chee na ọ bụ ndị mmadụ, malite ije ije"
Ọ bụrụ na e nwere kibbutzim ndị na-amaghị ihe Yom Kippur bụ, amaghị ihe Shabbat bụ na amaghị ihe olileanya bụ. A na-azụ oke bekee na ezi. Ha na nna ha hà nwere mmekọrịta?… Array? Array bụ ihe dị nsọ? Ha ebipụla onwe ha na ihe niile anyị gara aga na-arịọ maka Torah ọhụrụ. Ọ bụrụ na enweghị Shabbat na enweghị Yom Kippur, yabụ na gịnị ka ọ bụ onye Juu?
(Okwu Rabi Shach nke Rabbits, Yad Eliyahu, 1990)
Edere isiokwu a nke ọma n'oge mkparịta ụka ndị ọzọ na-agbawa n'etiti anyị na ndị Palestine, ma oge a ajụjụ njirimara nke mere ka ọ dịkwuo nso n'elu. Isi ihe kpatara mgbawa maka Israel bụ ọchịchọ ịnakwere steeti Israel dị ka mba ndị Juu. A na-egbo mkpa a, n'etiti ihe ndị ọzọ, site na arụmụka nke Palestine na ihe ndị ọzọ, bụ ndị chọrọ ka anyị buru ụzọ kọwaa ihe na onye bụ onye Juu n'anya anyị tupu anyị achọ ya n'aka ndị ọzọ. N'okwu a, ụfọdụ na-egosi anyị dị ka ụmụ ndị Khazars, si otú a na-emebi eziokwu akụkọ ihe mere eme nke akụkọ ndị Juu, ya bụ, na anyị bụ n'ezie ihe na-aga n'ihu nke ndị Juu oge ochie bụ ndị bi n'ebe a n'ala Israel. N'aka nke ọzọ, ndị Palestine na-ewetakwa akụkọ ihe mere eme (dịtụ delusional) njirimara mba dị ka ndabere maka arụmụka ha. Achọtara m ihe atụ na-atọ ụtọ karịsịa na akụkọ Eldad Beck, nke na-akọwa mkparịta ụka n'etiti Minista Tzipi Livni, onye na-ahụ maka mkparita ụka na ndị Palestine n'aha ọchịchị Israel, na Saib Erekat, onye na-ahụ maka mkparita uka n'akụkụ Palestine. :
Ndị otu nnukwu ndị nnọchiteanya Israel na ogbako nchekwa na Munich tụrụ n'anya n'abalị ụnyaahụ, mgbe onye otu ndị otu ndị na-akparịta ụka Palestine, Saeb Erekat, mara Livni ụra na ya na ezinụlọ ya bụ ndị Kenan ma biri na Jeriko 3,000 afọ (!?) Tupu bya ekua ndu Ízurẹlu l'alị Ízurẹlu ono, bụ Jọshụa Ben Nun. N'oge mkparịta ụka banyere usoro udo nke Middle East nke ha abụọ sonyere, Erekat malitere ikwu banyere akụkọ akụkọ dị iche iche nke akụkụ abụọ ahụ, ndị Israel na ndị Palestine, na-arụ ụka na ndị Palestine na ndị nnọchiteanya ya bụ n'ezie ụmụ nke ndị Kenan na ya mere nwere. ikike karịa ala ndị Juu. Livni zara ya na Israel na ndị Palestine ekwesịghị ịjụ nke akụkọ bụ nke ziri ezi, kama otu esi ewulite ọdịnihu. "Anaghị m ele ndokwa udo anya n'ụzọ ịhụnanya. Cynicism abụghị obere ihe ize ndụ karịa enweghị isi. "Israel chọrọ udo n'ihi na ọ bụ mmasị ya."
E wezụga arụmụka bara uru, enwere echiche na Livni na-agbalị izere mkparịta ụka a na-emenye ihere n'ihi na ọ na-eche na njirimara mba bụ n'ezie ụdị akụkọ, ya mere mkparịta ụka banyere ya adịghị mkpa. Ọ dịghị ihe ziri ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ n'ebe a, n'ihi na dị ka ọ na-emekarị taa, mba ọ bụla bụ njirimara nke ya, ọ dịghịkwa onye ọzọ kwere ka ọ mee otú ahụ maka ya. Ọtụtụ ndị ga-ekwu na ọbụna na njirimara ndị Juu enwere oghere jupụtara na akụkọ dị iche iche (ọ bụ ezie na usoro ọgwụgwọ dị nnọọ iche na ihe atụ Palestine). Nkwupụta nke Golda, Ben-Zion Netanyahu na ọtụtụ ndị ọzọ, na ọ dịghị ihe dị ka Palestine, na-ada nnọọ ochie na ochie taa. Ọ bụghị n'ihi nchoputa akụkọ ihe mere eme ọ bụla, kama n'ihi na ndị mmadụ na mba bụ echiche ndị a kọwara nanị n'ezie.
Ajụjụ nke njirimara, akụkọ ihe mere eme na omenala, jụ ịhapụ anyị. Ha guzoro ogologo na-awakpo anyị ugboro ugboro. Ọ dị ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị ebe ọ bụla n'ụwa bụ ajụjụ gbasara njirimara mba na-eche ndị mmadụ echiche dị ka ndị Juu nọ, na n'ezie na Israel. Enwere ike ịchọta arụmụka maka ma ị bụ ezigbo onye Belgium ma ọ bụ na ị bụghị, mana tumadi dị ka ngwá ọrụ maka ịkụ ndị mmegide, ma ọ bụ dị ka akụkụ nke ịhụnanya nke òtù mba-na mba. O siri ike ichetụ n'echiche otu ma ọ bụ onye na-agbasi mbọ ike na ajụjụ nke ịbụ onye Belgium, ma ọ bụ onye Libya, n'ezie na ezigbo ya.
N’ị were dị ka ihe atụ njirimara onwe anyị, ọ dịghị onye ọ bụla n’ime anyị na-ekpebi ma m̀ bụ ezi Maịkel Abraham, n’ime gịnịkwa ka m bụ Michael Abraham? Gịnị bụ nkọwa nke Michael Abraham, na m na-aza ya? Njiri mara onwe onye pụtara onwe ya na ọ chọghị nkọwa. Otú ahụ ka ọ dịkwa n'ihe banyere njirimara ezinụlọ. Onye ọ bụla si n’ezinụlọ Ebreham dị otú ahụ, ọ bụkwa ya. Ajụjụ gbasara njirisi na nkọwapụta n'ọnọdụ ndị a dị ka ọ bụ akụkụ. Enwere m mmetụta na n'ọtụtụ mba nke a bụkwa ikpe gbasara njirimara mba. Ọ nọ ebe ahụ, ọ bụkwa ya. Yabụ kedu ihe gbasara ya, na njirimara ndị Juu, nke na-enye anyị nsogbu n'obi dị adị? Ọ̀ ga-ekwe omume ma ọlị inwe mkparịta ụka na-ewuli elu na nke nwere ọgụgụ isi n'okwu a?
N'edemede a, m ga-agbalị ịkọwa nsogbu usoro dị na mkparịta ụka banyere njirimara ndị Juu, ma gosipụta nyocha nke ezi uche na nyocha nke ụzọ n'aka nke ọzọ, nke okwu ahụ na ihe ọ pụtara. M ga-Ya mere, agaghị m abanye nkọwa na nuances ka ọ ghara ida nnukwu foto, na-ekwe ka onwe m na-eji generalizations yiri ezi uche m na-enweghị mkpa kpọmkwem isi mmalite, Torah ma ọ bụ n'ozuzu echiche. Mkpa m maka isiokwu, na karịsịa maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke esemokwu Israel na Palestine, emeghị ebe a maka ebumnuche polemical kama iji gosipụta nkwupụta ga-ebilite na nkwupụta m. Anaghị m ekwupụta ọnọdụ ebe a gbasara esemokwu ahụ n'onwe ya na otu esi edozi ya.
Mkparịta ụka omenala na nkà ihe ọmụma na mkparịta ụka halakhic-Torah
Isi echiche dị na isiokwu nke mkparịta ụka ahụ, njirimara ndị Juu, edoghị anya. Enwere ike iwere mkparịta ụka gbasara ya na opekata mpe ụzọ abụọ: a. njirimara mba ndị Juu n'echiche nke nkà ihe ọmụma-agbụrụ-ọdịnala. B. Njiri mara ndị Juu n'echiche Torah-halakh (ọtụtụ agaghị anabata ma ọlị na ndị a bụ mkparịta ụka abụọ dị iche). Nke a n'ezie jikọọ na ajụjụ (àgà n'echiche m) ma okpukpe ndị Juu bụ okpukpe ma ọ bụ mba, nke m na-agaghị emetụkwa ebe a ma. Ndị a abụghị naanị mkparịta ụka abụọ dị iche iche, mana ha na-ekwupụta ụzọ mkparịta ụka abụọ dị iche iche: ma a ga-eduzi mkparịta ụka na usoro echiche izugbe ma ọ bụ na usoro halakhic-Torah.
N'ozuzu, njirimara okpukpe dị mfe ịkọwapụta karịa njirimara mba. Nke a bụ n'ihi na njirimara okpukpe dabeere na-akọrọ ụkpụrụ na norms, na karịsịa na omume na nkwenkwe (n'agbanyeghị na iche iche shades nke nkọwa. Ọ dịghị ihe na ndụ bụ n'ezie na mfe). N'ụzọ dị iche, njirimara mba bụ echiche amorphous karịa, ma dabere na akụkọ ntolite, ókèala, omenala, okpukperechi, asụsụ, àgwà ụfọdụ na ihe ndị ọzọ, ma ọ bụ ụfọdụ ngwakọta nke ihe ndị a niile. Ọ na-abụkarị njirimara mba anaghị emetụta ụkpụrụ echiche ma ọ bụ ụkpụrụ bara uru, na n'ezie ọ bụghị na ụkpụrụ pụrụ iche nke otu ndị mmadụ. Mana omenala, asụsụ, njirimara mmụọ nke otu ụdị ma ọ bụ ọzọ, na-agbanwe agbanwe na enweghị mgbagwoju anya, na n'ọtụtụ ọnọdụ, a pụkwara ịkọrọ ya na obodo ndị ọzọ. Ọzọkwa, ụfọdụ n'ime njirimara ndị a dịgasị iche, na otu onye ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ike ịnakwere ma ọ bụ gbahapụ ụfọdụ n'ime ha. Yabụ kedu n'ime ihe ndị a dị mkpa maka njirimara mba?
Nke a bụkwa ihe mere n’okwu ndị Juu. Ọ dị nnọọ mfe ịkọwa okpukpe ndị Juu. Ndị na-amanye idebe mitzvos nwere njirimara ndị Juu. Kedu mitzvos ole kwesịrị ịhụ? Nke a bụ ajụjụ gbagwojuru anya, ọ na-aghọwanyekwa mgbagwoju anya na ọgbọ anyị dị mgbagwoju anya, mana ọ bụ ajụjụ nke abụọ. Nkwenye n'ụkpụrụ na mitzvos bụ nkọwa zuru oke maka mkpa anyị. Ọzọkwa, na ọnọdụ halakhic ajụjụ nke njirimara, ọbụna nke okpukpe, enweghị mkpa. Enwere nkọwa doro anya halakhic gbasara ụdị ọrụ okpukperechi niile, onye a na-agwa ya na onye agbụ ya. Ajụjụ gbasara njirimara okpukperechi anaghị ebili ozugbo na ụwa echiche Torah-halakhic.
Ọ bụrụ na n'ihe gbasara njirimara okpukpe, ọ dịghị mkpa halakhim maka ajụjụ ahụ, mgbe ahụ ọ dị mfe na ihe onwunwe n'ihe gbasara ajụjụ nke njirimara mba. Gịnị bụ nsonaazụ halak nke mkpebi siri ike na otu nwere njirimara mba ndị Juu? Na halakhah, ajụjụ nke onye na-edebe ma ọ bụ na-adịghị edebe mitzvos nwere ihe ọ pụtara, na ọbụna karịa ajụjụ nke onye ga-ma ọ bụ na-agaghị edebe ha. Ajụjụ nke njirimara enweghị azịza halak nke doro anya, ọ nweghịkwa ihe ọ pụtara kpọmkwem halak nke n'onwe ya.
Site n'echiche halak, onye Juu bụ onye nne Juu mụrụ ma ọ bụ gbanwee nke ọma. Nke a bụ njirimara ya n'echiche halakhic, ọ dịghịkwa mkpa ihe ọ na-eme, na karịsịa ma ọ na-edebe ma ọ bụ na-edebeghị mitzvos. Halachically ọ n'ezie ga-erube isi na ha, na ọ ga-ekwe omume na-atụle ma onye na-emeghị otú ahụ bụ onye omempụ na ihe a ga-eme ya. Ma ajụjụ banyere njirimara ya adịghị mkpa. Akpaokwu dị ka “si n’Israel dum pụta” na-abụkarị ihe atụ, na enweghị ezi ihe ọ pụtara na halakhah. Ma ọ bụrụgodị na ha nwere ụfọdụ ihe ọ pụtara, halakhah na-akọwapụta ha dịka usoro teknụzụ ya si dị.
National Identity: Ọdịiche dị n'etiti Agreement na Contingencies
Ka ọ dị ugbu a, anyị enyochala ajụjụ gbasara njirimara site na echiche halakic-okpukpe. Site n'echiche nkà ihe ọmụma n'ozuzu, mmasị bụ isi bụ na njirimara mba ọ bụghị na okpukpe. Ekwupụtala m na njirimara mba n'ozuzu bụ echiche na-edoghị anya na nke siri ike ịkọwa. N'ebe a, m ga-elekwasị anya karịsịa n'osisi abụọ dị oke egwu n'ihe metụtara nkọwa nke njirimara mba: nkwenye (conventionalist) obibia na mkpa (dị mkpa).
Ajuju nke ịhụ mba n'anya na njirimara mba bụ ajụjụ ọhụrụ na n'ezie ọgbara ọhụrụ. N’oge ochie, n’ihi ihe dị iche iche, ndị mmadụ na-ajụ onwe ha ihe bụ́ mba ha na otú ha ga-esi akọwa ya. Ụwa kwụ ọtọ karịa, ndị mmadụ emeghị ọtụtụ mgbanwe ná ndụ ha, ọ gaghịkwa esiri ha ike iji njirimara ndị na-asọrịta mpi chere n'echiche ha. Ọ bụ obi abụọ ma e nwere na ha nsụhọ a iche iche echiche nke mba njirimara, na ọbụna ma ọ bụrụ na e nwere mgbanwe na njirimara ha bịara spontaneously na ndammana na amaghị. Amụma mba ahụ bụ ihe okike, yiri njirimara onwe onye na nke ezinụlọ ndị a kpọtụrụ aha n'elu. Nzụlite okpukpe sokwa kpata mmasị ahụ, ebe ọ bụ na ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ ji okpukpe kpọrọ ihe. N’ụwa mbụ e nwere echiche na ọchịchị bụ onyinye sitere n’aka Chineke nye ndị a mụrụ ịbụ eze, otú ahụkwa ka e ji mara mba na okpukperechi anyị na njikọ ya. Ihe ndị a nile ka e kere ụwa n’ụbọchị isii nke Jenesis, ma e weere ya dị ka ihe na-adịghị mma ma were ya mee ihe.
N'oge a, na ịrị elu nke ịhụ mba n'anya na Europe na n'ụwa n'ozuzu, ajụjụ ahụ malitere ịse n'ike n'ike. Ihe isi ike nke ịkọwapụta njirimara mba ewepụtala azịza ndị na-abụkarị n'etiti okporo osisi abụọ: nke mbụ bụ ogwe osisi nke na-ahụta njirimara mba dịka ihe dabere na nkwekọrịta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ aka ike. Ozugbo otu na-ahụ onwe ya dị ka ndị mmadụ, ma ọ dịkarịa ala ma ọ bụrụ na ọ na-adịru oge ụfọdụ, n'ihi na mgbe ahụ ọ bụ ndị mmadụ. Onye na-ede uri Amir Gilboa, na 1953, na-esote nguzobe nke steeti ahụ, kọwara ya dị ka ndị a: "Na mberede, otu nwoke biliri n'ụtụtụ wee chee na ọ bụ ndị mmadụ, malite ije ije." Ogwe nke ọzọ bụ nghọta pụtara ìhè nke na-ahụ njirimara mba dị ka ihe ebumpụta ụwa na ahaziri ya, dịka njirimara nkeonwe. Mgbe mmadụ na-eche karịa maka ọdịdị nke mmewere "okike" ahụ na-adịghị ahụkebe, mba, romantics mgbe ụfọdụ na-abịa na metaphysics. Dịka ụzọ ndị a si dị, mba nwere ọdịdị metaphysical n'ụzọ ụfọdụ, ihe dịka echiche Plato, na ndị mebere mba ahụ na-esonye n'ime ihe a n'ihi njikọ metaphysical ha na ya. Ịnyịnya ọ bụla bụ nke otu ịnyịnya na-enweghị mkpa ịkọwapụta ihe ịnyịnya bụ n'ụzọ doro anya. Ọ bụ naanị ịnyịnya, ọ bụkwa ya. N'otu aka ahụ, onye Belgium ọ bụla so na otu Belgium na-etinyeghị nkọwa ọ bụla. Ọ bụghị naanị n'ihi na ọ siri ike ịtụ aro nkọwa, mana n'ihi na ọ dịghị mkpa. njirimara obodo bụ echiche ebumpụta ụwa dịka njirimara onwe onye na nke ezinụlọ.
Ọ dị mkpa ịghọta na okwu Amir Gilboa na-akọwa mkpata mba ahụ nwekwara ike dee ya n'ime usoro nke echiche metaphysical, mana ebe a ọ ga-abụ edemede ahụmahụ, nke otu eziokwu metaphysical nke dịbu na-ehi ụra na-abanye n'ime uche ndị mmadụ. . Ọ na-akpọte n'ime ha na ha chọrọ ịghọta ya na omume, na kpọmkwem institutional ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-elekọta mmadụ uche. Na mberede, mmadụ biliri wee nwee mmetụta nke eziokwu metaphysical (nke na-abụkarị eziokwu) na ọ bụ ndị mmadụ, malite ije ije. Na romance nke mba edemede nwoke bilitere n'echiche nke edemede si a coma, n'ụzọ dị iche na consensual echiche nke o bilitere na-akọwara dị ka mgbago si n'ala na-amalite njem. Arụmụka ahụ bụ maka ma nguzobe ahụ bụ edemede ka ọ bụ nguzobe.
njirimara mba: usoro nkwenye na okwu ya
N'akụkụ nke ekwekọrịtara na map ahụ guzoro ndị na-eche echiche dịka Benedict Anderson, n'akwụkwọ ya nwere mmetụta Obodo chere echiche (1983), na ọtụtụ ndị ọzọ sochiri. Ndị a na-agọnarị ịdị adị nke ọdịnaya dị mkpa nke echiche dịka obodo na njirimara mba. Ndị nwere usoro a na-ahụ mba dị ka ụdị akụkọ ifo na-enweghị isi nke a na-emepụta na kristal na nsụhọ nke ụfọdụ otu n'ime akụkọ ntolite ha (na-ekekọrịtakarị). Ọ dị mkpa ịghọta na nke a abụghị ikwu na edemede a abaghị uru, ma ọ bụ na ihe ọ chọrọ na nkwupụta ya nwere ike ileda anya. maa ọ bụghị. Amamihe mba dị ka eziokwu nke uche ma dị mkpa nye ndị mmadụ, yana dịka ọtụtụ ndị kwenyere na ọ kwesịrị nsọpụrụ. Ma n'ezie ọ bụ ihe aka ike. Iji kọwapụta nkọwa nke ụzọ a, onye na-agụ ga-agbaghara m ma ọ bụrụ na m etinye paragraf ole na ole n'ihe dị ugbu a ebe a.
Ihe atụ doro anya nke ụzọ dị na ụlọ akwụkwọ nkwenye bụ echiche nke Prof. Shlomo Zand. Zand bụ onye ọkọ akụkọ ihe mere eme sitere na Mahadum Tel Aviv, onye bụbu onye nọ na okirikiri Compass ma bụrụkwa nke okirikiri aka ekpe na-enweghị atụ na Israel. N'akwụkwọ ya na-ese okwu Olee mgbe, oleekwa otú e si chepụta ndị Juu? (Wrestling, 2008), Zand họọrọ inyocha ihe atụ nke na-agbagha tesis Benedict Anderson. Ọ na-agbalị igosi ebe ahụ na ndị Juu bụ obodo e chepụtara echepụta. Ọrụ a dị oke mkpa, n'ihi na ihe ọ bụla echiche anyị banyere ọnọdụ Anderson bụ, ọ bụrụ na e nwere ihe atụ na ụwa (Western) nke na-eguzo n'ụzọ dị nnọọ iche na edemede ya bụ ndị Juu. N'ezie, n'uche nke m (na n'echiche nke ọtụtụ ndị ọzọ) akwụkwọ Zand na-enye aha ọjọọ maka nchọpụta akụkọ ihe mere eme, na karịsịa imebi ihe dị mkpa dị mkpa dị n'etiti echiche na nchọpụta agụmakwụkwọ. Ma ihe na-enye ya ohere ime ihe niile a bụ ihe mgbagwoju anya nke echiche nke njirimara mba.
Ọ bụrụ na anyị na-aga n'ihu na ihe ndị dị ugbu a, ihe atụ doro anya karịsịa site na ogwe osisi ọzọ, nke na-akwado echiche Anderson nke ọma, bụ ndị Palestine. Ndị Palestine bụ ndị na-adabere n'ụzọ doro anya na njirimara efu (nke na-agụnye mgbe ụfọdụ akụkọ ifo, dị ka nke ndị Filistia ma ọ bụ ndị Kenan nke Akwụkwọ Nsọ, ma ọ bụ ọbụna n'oge ochie), Kere fọrọ nke nta nke ọ bụla na akụkọ ihe mere eme okwu.
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya igosi ebe a otu nhụta echiche nke nkwenye. Na mmalite nke akwụkwọ ya, Zand raara akwụkwọ ahụ: "Na ebe nchekwa nke ndị bi na al-Sheikh Mu'anis bụ ndị a chụpụrụ n'oge gara aga site na ebe m bi na-arụ ọrụ na nso ugbu a." Ụda ahụ na-akọwa ma dị jụụ, na ihu ya ọ dị ka ọ gaghị ahụ ya dị ka nsogbu. Ọ bụrụ na njirimara mba bụ ihe ebumpụta ụwa, mgbe ahụ otu njirimara echiche na-akwali onye nke ọzọ. Ọ na-abịa, ọ na-apụkwa n'anya. Nke a bụ ụzọ ụwa. Dị ka ya si kwuo, ndị a bụ eziokwu nke uche ma ọ bụghị ụkpụrụ metaphysical ma ọ bụ eziokwu, ọbụnadị eziokwu akụkọ ihe mere eme. Nke a bụ akụkụ nke ọzọ nke ego a na-ahụkarị nke na-ahụ njirimara mba dị ka ihe efu.
Nkwubi okwu bụ na ọ bụrụ na njirimara mba bụ n'ezie nkwekọrịta nke onwe onye aka ike, mgbe ahụ, abụọ (ọ bụ ezie na ọ bụchaghị) enwere ike ịchọta nkwubi okwu dị ala (n'agbanyeghị na ọ bụchaghị): 1. Ụlọ ọrụ dị otú ahụ enweghị ezigbo ikike. Mba dị iche iche bụ ihe e kere eke na-enweghị ọkpụkpụ, bụ́ ndị na-enweghị ihe dị adị n'abụghị echiche ndị mmadụ. 2. National njirimara bụ akụkụ dị mkpa nke njirimara nke ọtụtụ ndị mmadụ na n'ezie ọ dịghị mba ọzọ njirimara (nke bụ eziokwu), ya mere eziokwu na ọ bụ echiche efu apụtaghị na nkwupụta na nkwupụta nke ụlọ ọrụ dị otú ahụ nwere ike ịbụ. elelị.
N'ụzọ ọrụ ebube, ọtụtụ mmadụ ole na ole ndị nwere usoro a na-ekwe ka ha jiri ya na-akatọ otu njirimara (n'ihe banyere Zand, onye Israel-Ju) ma bo ha ebubo na ha na-agbakọ mgbakọ ọha na eze aka ike na nke a na-eche n'echiche, na-emepụta onwe anyị ịmara, na na N'otu oge ahụ site n'otu echiche ahụ.Nke njirimara echiche ọzọ (onye Palestine, na ihe atụ nke Zand). Ihe na-enweghị isi na-akawanye njọ site n'eziokwu ahụ bụ na ndị Juu karịsịa bụ ihe atụ kacha nta nke ọma na ndị Palestine bụ ihe atụ doro anya nke ịhụ mba n'anya. M ga-ekwughachi ma mesie ya ike na echeghị m ebe a iji kparịta njikọ kwesịrị ekwesị na nkwupụta nke obodo dị otú ahụ maka nkwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị, n'ihi na nke a bụ ajụjụ ụkpụrụ-uru-ọchịchị. N'ebe a, a na m emeso naanị nkọwa akụkọ ihe mere eme-omenala na nkatọ nke enweghị nkwekọrịta na mkparịta ụka.
Njirimara mba: Ụzọ dị mkpa
Ka ọ dị ugbu a, eguzowo m n'akụkụ omenala na ụdị nsogbu nke ya. Ikekwe kpọmkwem n'ihi ihe isi ike ndị a, ụfọdụ na-ewere echiche nke njirimara mba na mpaghara metaphysics. Mwelite mba na Europe, yana edemede mba ndị Juu nke gosipụtara na ngagharị nke Zionist na mmetụta ịhụnanya nke mba Europe nwere mmetụta dị ukwuu. Mmegharị ndị a na-egosipụtakarị ọnọdụ na ịhụ mba n'anya na-adabere na ụfọdụ ihe metaphysical (ndị mmadụ, mba). Okwu ndị dị oke egwu nke echiche a pụtara n'okwu ndị fasizim (na Hitler Germany, Bismarck, na ọtụtụ ndị ọzọ bu ya ụzọ, yana n'Ịtali Garibaldi na ndị ọzọ). E gosipụtara omume ndị a na echiche Torah nke Rabbi Kook na ụmụ akwụkwọ ya. Ndị a nakweere echiche metaphysical a, wee tụgharịa ya ka ọ bụrụ isi n'okwukwe ndị Juu. Nkume ndị Juu, nke na-adịghị ahụkebe, zoro ezo, gọnarị na nke a na-akpagbu, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ịdị, bụ ihe na-akọwa okpukpe ndị Juu. Omume ọma nke Israel na ihe okike na mkpụrụ ndụ ihe nketa dị iche iche nke onye Juu ọ bụla, ghọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe nleba anya maka okpukpe ndị Juu, karịsịa mgbe njirimara omenala (ememe) niile na-apụ n'anya, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ kwụsịrị ịbụ ihe nkwekọrịta kwadoro. "Knesset nke Israel" esiwo n'ihe atụ tụgharịa ghọọ okwu ontological nke echiche metaphysical nke ndị Juu.
M na-ewetara ebe a substantive obibia nzaghachi nke consensual otu, ma na akụkọ ihe mere eme axis o doro anya na substantive (n'agbanyeghị na ọ bụghị mgbe niile metaphysical) echiche na-ebute ụzọ omenala. N'akụkọ ihe mere eme, ọ bụla usoro omenala nke pụtara na nzaghachi maka ụzọ dị mkpa. Ọ bụrụ na a na-amata usoro ahụ nke ọma na modernism na edemede mba, mgbe ahụ, usoro iwu bụ akụkụ nke "critique ọhụrụ" nke mba ụwa gachara nke ejiri ọnọdụ a maara dị ka postmodernism.
Paradox bụ isi
Ka ọ dị ugbu a, akọwara m echiche abụọ na-emegide ibe ha. Ebee ka ha na-agbakọ? Kedu ihe dị iche n'etiti ha? Echere m na na ọkwa a anyị nọ na ihe ijuanya. Ndị na-ebute ụzọ ụzọ nke abụọ, ndị dị mkpa, bụ ndị a gụpụrụ n'ịchọ nkọwa nke njirimara mba. A sị ka e kwuwe, dị ka ha siri kwuo, onye ọ bụla nwere njikọ maka echiche metaphysical (Knesset nke Israel) bụ onye Juu. Ọbụlagodi na esemokwu nke ntughari anyị na-anụ ugboro ugboro banyere arụmụka nke "Mkpụrụ nke Israel" dị ka ihe ndabere maka ịchọ mmemme nke usoro ntụgharị, na ọ bụghị ihe ijuanya na ọ na-abịa tumadi site na okirikiri nso Rabbi Kook. Ọ bụ metaphysics na-akọwa anyị dị ka ndị Juu, ya mere a gụpụrụ anyị na mkpa nkọwa mmemme. Maka ihunanya metaphysical, njirimara ndị Juu bụ eziokwu pụtara ìhè nke na-edoghị n'okpuru ọdịnaya, ụkpụrụ, ma ọ bụ ntọrị ọ bụla ọzọ. N'ezie, ndị nwere àgwà dị otú ahụ nwere ike ikwere na onye Juu ọ bụla aghaghị idebe ụkpụrụ na mitzvos nke Torah, ma nke a enweghị ihe jikọrọ ya na nkọwa ya dị ka onye Juu na njirimara ya.
N'ezie, ọbụna dị ka echiche nke ịhụ ihe onwunwe n'anya-metaphysical si kwuo, e nwere ike ịtụpụta àgwà dị iche iche nke mba ndị Juu, ma n'echiche ha ndị a bụ àgwà na-adịgide adịgide, ya bụ, ha adịghị mkpa maka nzube nke ịkọwa mba ahụ. Ọbụna ndị na-adịghị ahụ ha bụ ndị Juu n'ihi ịbụ ndị Juu n'echiche metaphysical. Dị ka ihe a na-atụghị anya ya, ajụjụ nke njirimara bụ ihe ọhụrụ na echiche ọdịnala.
N'aka nke ọzọ, ndị na-na-conventional obibia, ndị na-ekweghị na metaphysical romance, chọrọ ọtụtụ ndị ọzọ nkọwa, njirisi na àgwà nke ha nwere ike ikpe onye bụ nke mba a njirimara na onye na-adịghị. Ọ bụ ya mere ha ji na-ajụ onwe ha ihe mere anyị ji bụrụ ndị Juu. Ọ bụrụ na ọ bụghị metaphysics, gịnị bụ? Mana ndị na-eme omenala anaghị ahụ nkọwa dị otú ahụ nwere ezi uche, wee si otú a bịarute n'echiche nke njirimara efu. Ọtụtụ n'ime ha na-anakwere nkọwa nke na-eyighị ka ọ bụ ihe na-aga n'ihu nke njirimara ndị Juu dịka e si ghọta ya n'ime ọtụtụ puku afọ tupu anyị. Ịgụ akwụkwọ Amos Oz, ịsụ Hibru, ije ozi n'òtù ndị agha na ịkwụ ụtụ isi na steeti, na-akpagbu na Oké Mgbukpọ ahụ, na ikekwe site na isi mmalite Torah, bụ ihe e ji amata ndị Juu taa. Na nke a ka a ga-atụkwasịrị akụkọ ihe mere eme na usoro ọmụmụ. Ọ bụ eziokwu na naanị nke a bụ ihe e ji mara ndị Juu n'oge anyị (n'agbanyeghị na ọ bụghị ha niile). Ọ bụrụ otú ahụ, n'echiche ha njirimara mba bụkwa ụdị eziokwu, dịka na usoro metaphysical, ma e wezụga na ebe a bụ eziokwu nke uche-akụkọ ihe mere eme na ọ bụghị eziokwu metaphysical.
Ajụjụ abụọ na-ebilite n'ihe gbasara usoro usoro omenala:
N'echiche dị aṅaa ka njirimara mba a ji bụrụ ihe na-aga n'ihu na ngosipụta ya gara aga? Ọ bụrụ na naanị njirimara efu bụ ihe ndabere maka ịga n'ihu, mgbe ahụ ezughị ezu. Anyị ga-ebu ụzọ kọwaa otu na naanị mgbe ahụ ka anyị nwere ike ịjụ ihe njirimara ya. Mana ọ bụrụhaala na njirimara adịghị adị ka anyị ga-esi kọwaa otu? Nke a bụ ajụjụ na-anọgide na-enweghị ngwọta na-eju afọ, ọ dịghịkwa ihe ngwọta na-eju afọ maka ya na foto nkwenye. Dị ka ekwuru, ọbụna ndị na-ejide ọnọdụ dị mkpa enweghị ngwọta maka ajụjụ a, ma e wezụga na ọ dịghị enye ha nsogbu.
Nkọwa ndị a ọ "na-arụ ọrụ" n'ezie? A sị ka e kwuwe, nkọwa ndị a anaghị akwado ule ọ bụla dị egwu. Chee echiche banyere ntọala ndị atụpụtara n'elu. N’ezie, ikwu okwu n’asụsụ Hibru egosichaghị na e nwere ọdịiche dị n’etiti ndị Juu, n’aka nke ọzọkwa, e nwere ọtụtụ ndị Juu na-adịghị asụ Hibru. Ọbụna njikọ na Akwụkwọ Nsọ adịghị otú ahụ (Iso Ụzọ Kraịst nwere njikọ chiri anya na ya, na ọtụtụ ndị Juu ejikọtaghị ya na ya ma ọlị). Ịkwụ ụgwọ ụtụ isi na ọrụ agha n'ezie adịghị akọwapụta ndị Juu (Druze, Arab, ndị ọrụ na-akwaga mba ọzọ na ụmụ amaala ndị ọzọ na-abụghị ndị Juu na-eme nke a nke ọma). N’ụzọ megidere nke ahụ, e nwere ezigbo ndị Juu ole na ole bụ́ ndị na-emeghị otú ahụ, ọ dịghịkwa onye na-enwe obi abụọ n’okpukpe ndị Juu ha. A na-agụ Amos Oz na Akwụkwọ Nsọ n'ụwa niile, ọ bụrụgodị na ọ bụghị n'asụsụ mbụ. N’aka nke ọzọ, akwụkwọ e dere na Poland ọ̀ metụtakwara Bible? Yabụ kedu ihe fọdụrụ?
Ọ dị mkpa ịmara ebe a na e nwere n'ezie àgwà ndị Juu, dị ka a pụrụ ikwu maka mkpokọta ọtụtụ ndị ọzọ. Mana njirimara agwa abụghị otu obodo. Ọzọkwa, iji kwuo maka àgwà agwa mmadụ ga-ebu ụzọ kọwaa otu ndị e nyere ya. A sị ka e kwuwe, e nwere ọtụtụ ndị n’ụwa ndị e nyere àgwà nke nwere ike ịdaba n’okpuru nkọwa nke àgwà ndị Juu, ma ọ dịghị onye ga-asị na ha bụ ndị Juu. Ọ bụ naanị mgbe anyị matara onye Juu, anyị nwere ike leba anya n’ìgwè ndị Juu ma jụọ ma e nwere àgwà ndị e ji mara ha. E nwekwara akụkọ ihe mere eme nke ndị Juu na otu mmalite, mana ndị a bụ naanị eziokwu. O siri ike ịhụ uru na ihe ndị a niile, ma ọ bụghị ihe doro anya ihe kpatara eji aghọta ihe ndị a niile dị ka nsogbu dị adị na ihe dị mkpa nkọwa. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị Juu nwere mmalite na akụkọ ihe mere eme n'ụzọ ụfọdụ. Gịnị mezie? Enwere ohere maka ikwu onye Juu bụ onye Juu, n'echiche nke usoro ọmụmụ na akụkọ ihe mere eme? Ọ bụrụ na ọ dị ka ya, ọ dị ka ya, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ bụghị ya.
Ọ bụrụ otú ahụ, ọ bụrụgodị na anyị na-emeghe nnọọ ma na-agbanwe agbanwe, ọ ka na-esi ike ịtụ mkpịsị aka aka na njiri dị nkọ maka onye bụ onye Juu mba n'echiche bara uru na usoro nkwenye. Ikekwe anyị kwesịrị ịnakwere usoro a nabatara na nyocha nke uche (na mgbe ụfọdụ na-ahụkwa ahụike), dịka nke ịdị adị nke ụfọdụ njirimara sitere na ndepụta e nyere ga-abụ nkọwa na-eju afọ nke njirimara ndị Juu? Dị ka m gosiri n'elu, ọ na-esiri ike ịhụ nke a dị ka ihe na-eju afọ ma. Ọ dị onye ọ bụla n'ime anyị nwere ike ịnye ụdị ndepụta a? Onye ọ bụla n'ime anyị nwere ike ịkọwa ihe kpatara achọrọ isii n'ime ndepụta njirimara a karịa asaa ma ọ bụ ise? Na nke ka nke, ụkpụrụ a ọ̀ ga-enwe ihe ịga nke ọma n’ezie n’ịmata ọdịiche dị n’etiti ndị Juu na ndị na-abụghị ndị Juu n’ụzọ kwesịrị ekwesị? O doro anya na ọ bụghị (lee ọmụmaatụ n'elu).
N'ihi ọdịdị nsogbu a, ọtụtụ n'ime ndị na-eme omenala na-alaghachi ebe a n'ebe a na-ahụ maka mkpụrụ ndụ halakhia, nke pụtara na ha onwe ha na-achọkwa njirimara ndị Juu na nne. Ndị ọzọ ga-atụkwasị ya na nsụhọ nke mmadụ: onye Juu bụ onye na-eche ma na-ekwupụta na ya bụ onye Juu. Ihe okirikiri arụnyere na ihe efu nke nkọwa a anaghị enye ndị na-eme omenala nsogbu nsogbu. Nkwekọrịta dị njikere ịnakwere mgbakọ ọ bụla, ma ọ bụ okirikiri ma ọ bụ enweghị isi mgbe ọ bụla. Ndaba ya bụ n'ihi na ha kwekọrịtara na ya. Mana a na-atụ anya na obodo na-eche echiche ga-adị njikere ịkwado njirimara ya n'ụkpụrụ e chepụtara echepụta. E wezụga arụmụka ndị a niile, ọ ka bụ eziokwu ma ọ bụ arụmụka efu, nke na-akọwaghị esemokwu dị n'akụkụ okwu a.
Rabbi Shach n'okwu ya nke e hotara n'elu na-awakpo nkọwa nke njirimara ndị Juu, ma na-eme ya na okwu halakhic. Ọ na-egosipụta n'ụzọ doro anya ụdị ọnọdụ dị mkpa, mana ọ bụchaghị metaphysical ( njirimara mba n'ihe gbasara ntinye aka na ụkpụrụ ụfọdụ). Wikipedia 'Okwu nke Rabbits na Pigs' na-akọwa mmeghachi omume nke Rebbe nke Lubavitch na okwu rabbits nke Rabbi Shach dị ka ndị a:
Lubavitcher Rebbe',, Ogwe Plugata Of Rabbi Shach ruo ọtụtụ afọ, zara okwu n'okwu nke ya, nke o nyere naỤbọchị izu ike E mesịa na beit midrash ya. Rebbe kwuru na o nweghị onye ekwela ka o kwuo okwu megide ndị Juu. Echiche ndị Juu bụ na “Israel, ọ bụ ezie na mmehie nke Izrel bụ,” ụmụ Izrel bụ “naanị nwa nwoke” nke Mmmmmmmmmm Ma onye nēkwu okwu n'amam-ikpe-ya, dika onye nēkwu na ikpé nke Chineke. A ghaghị inyere onye Juu ọ bụla aka ịnọgide na-enwe ihe nile Iwu Okpukpe, ma ọ dịghị ụzọ ịwakpo ya. Rebbe kọwara ndị ya na ha dịkọrọ ndụ dịka "ọkụ gbara Udim", na "Ụmụ ọhụrụ ejidere", Na ọ bụghị ha ga-ata ụta maka ihe ọmụma ha na omume ha n'ebe okpukpe ndị Juu nọ.
Nke a bụ ọmụmaatụ mmeghachi omume sitere na ụdị metaphysical. N'aka nke ọzọ, onye isi ala n'oge ahụ, Haim Herzog, kwupụtara nzaghachi nke omenala maka okwu Rabbi Shach, mgbe ọ na-eche ka ndị Juu nke kibbutzniks nke Kubilniks na ndị na-eji aka ndị tọrọ ntọala steeti ma jee ozi na ndị agha na nnukwu nsọpụrụ nwere ike isi bụrụ. jụrụ ajụjụ. Yabụ kedu ihe Rabbi Shach na-akwado maka? Ọ naghị anabata metaphysics, ọ dịghịkwa njikere ịbụ onye na-eme omenala. Enwere nhọrọ nke atọ?
Echiche ndị a na-apụghị ịkọwa akọwa adịghị adị?
Nkwubi okwu doro anya bụ na echiche nke njirimara mba ndị Juu enweghị nkọwa. Ọ bụ n'ezie ike na-enye dị iche iche nkọwa, onye ọ bụla dị ka ya n'ókè nke creativity, ma ọ bụ n'ezie na-agaghị ekwe omume na-ekweta na a definition, na ọ dịghị ihe ọzọ n'ihi na ọtụtụ ìgwè dị iche iche ha adịghị ka ewepu ndị na-adịghị izute ha definition si. Israel nile (ọ bụrụhaala na nne ha bụ onye Juu). Nke a ọ̀ pụtara na njirimara dị otú ahụ bụ ihe e chepụtara echepụta, nke pụtara na e nweghị onye Juu n'ezie? Ọ bụ naanị nhọrọ maka metaphysics ma ọ bụ usoro iwu halakhic bụ akụkọ? O doghi m anya.
Ajụjụ a na-ewega anyị n'ógbè nkà ihe ọmụma na ọ dịghị ebe ịbanye ebe a, n'ihi ya, m ga-agbalị imetụ ha aka na nkenke. Anyị na-eji ọtụtụ okwu edoghị anya, dị ka nka, ezi uche, sayensị, ọchịchị onye kwuo uche ya na ndị ọzọ. Agbanyeghị ka anyị na-abịaru nso ịkọwapụta echiche dị otú ahụ anyị na-ezute nsogbu ndị yiri nke ahụ akọwara ebe a. Ọtụtụ ndị na-ekwubi site na nke a na echiche ndị a bụ ihe e chepụtara echepụta, ma na-ewukwa ya gburugburu nnukwu obí postmodern (njikọ echiche na Rabbi Shagar abụghị ihe mberede). Ọmụmaatụ doro anya nke a bụ akwụkwọ Gideon Ofrat, Nkọwa nke nka, Onye na-enye ọtụtụ nkọwa dị iche iche nke echiche nke nkà ma jụ ha, ruo mgbe o mesịrị bịa na nkwubi okwu bụ ihe a na-egosipụta na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie (!). N'aka nke ọzọ, Robert M. Piersig, n'akwụkwọ nzuzo ya Zen na nka nke mmezi ọgba tum tum, Na-akọwa njem ihe atụ nke onye prọfesọ na-ekwu okwu aha ya bụ Phydros, bụ onye na-achụso ịkọwapụta echiche nke àgwà. N'oge ụfọdụ ọ na-enweta nghọta, na-ekwubi na nkà ihe ọmụma Gris emewo ka anyị chee echiche na echiche ọ bụla aghaghị inwe nkọwa, na echiche na-enweghị nkọwa adịghị adị (a na-eche ya). Ma echiche dị ka àgwà nwere ike ịbụ ihe a na-apụghị ịkọwapụta, ma ọ jụrụ ịnakwere nkwubi okwu na ọ bụ echiche na-enweghị ezigbo ọdịnaya. Mgbakọ nkịtị. O doro anya na enwere njikọ dị mma ma enwere ụfọdụ na-adịghị. N'otu aka ahụ, e nwere ọrụ nkà na ọrụ ndị na-abaghị uru nka. Nkwubi okwu bụ na echiche dị ka ịdịmma, ma ọ bụ nka, ọ bụ ezie na ọ siri ike na ikekwe ọ gaghị ekwe omume ịkọwa, ka dị. A naghị echekwa ha.
Ọ dị ka a pụkwara ikwu otu ihe ahụ n'ihe gbasara njirimara mba. Mmadụ nwere ike ịnakwere tesis dị mkpa na e nwere njirimara mba na-enweghị mkpa metaphysics. Ihe njirimara obodo nwere njirimara dị iche iche na ọ na-esiri ike ịnye nkọwa maka ya, ma ndị a abụghịcha echiche ma ọ bụ mgbakọ, ma ọ bụ na ha abụghị metaphysics. Ọ nwere ike ịbụ echiche amorphous nke siri ike ma ọ bụ nke na-agaghị ekwe omume ịkọwa. Ọ dị m ka nkọwa nkọwa yiri nke ahụ na-adabere n'echiche Rabbi Shach (n'agbanyeghị na ọ na-atụpụta nkọwa halakhic, ma ọ naghị anabata ohere nke nkọwa mba ọzọ). Ọ na-arụ ụka na e nwere nkọwa dị mkpa nke njirimara ndị Juu, na ọbụna ihe ndị mmadụ na-ekwu na-adabere na ya. N'aka nke ọzọ, ọ dịghị ahụ metaphysics ka ihe ọzọ na-eju afọ. Ma mụ onwe m, anaghị m eche otú ahụ. Enweghị metaphysics, ahụghị m ka mmadụ nwere ike isi kwuo maka otu mba n'echiche ontological. Ma o doro m anya na ọtụtụ ndị ekwetaghị n’ihe m kwuru.
Ruo ugbu a nkà ihe ọmụma. Ma ugbu a ajụjụ na-abịa: Gịnị mere ihe a nile ji dị mkpa ma ọlị? Gịnị mere anyị ji kwesị ịkọwa, ma ọ bụ ọbụna gbalịa ịghọta, njirimara ndị Juu? Azịza m bụ na ọ nweghị ihe ọ bụla. Enweghị ihe ọ pụtara maka ajụjụ a, ma ọ bụ na ọ kachasị ihe gbasara nyocha ọgụgụ isi (na-abụkarị ihe efu, ma eleghị anya ọbụna ihe efu nke ọdịnaya). Ọ bụrụ na m nwere ike imehie na nkà mmụta uche nke oche oche, ịchọ onye Juu bụ ngosipụta nke ntinye aka na okpukpe ndị Juu na akụkọ ihe mere eme na-enweghị njikere itinye ha n'ọrụ. Ndị mmadụ na-achọ ụzọ ọzọ maka njirimara nke bụbu okpukperechi, ka ha wee nwee mmetụta nke ndị Juu mgbe ha nwesịrị nkwenye na nkwenye okpukpe. Iji mezuo nke a, a na-echepụta ajụjụ ọhụrụ na echiche ọhụrụ, a na-etinyekwa nnukwu mbọ na-enweghị isi n'ịghọta ha.
N'uche nke m, ọ dịghị ụzọ ọ bụla iji kparịta mkparịta ụka nwere ọgụgụ isi banyere njirimara ndị Juu, na n'ezie ịghara ime mkpebi banyere ya, nke na-adịghịkwa mkpa n'ezie. Ọ bụrụ na ọ bụ mgbakọ, gịnị kpatara esemokwu maka nkwekọrịta. Onye ọ bụla ga-abịanye aka n'akwụkwọ nkwekọrịta nke pụtara n'ihu ya. Ọ bụrụ na ọ bụ metaphysics, ahụghị m ka o si enweta arụmụka na arụmụka. Ọbụlagodi na anyị anabata echiche dị mkpa nke nwa amaala ndị Juu (ma ọ bụghị na halakhic), nke a enweghị ike ịnweta nkọwa, ịrụ ụka, na n'ezie ọ bụghị na mkpebi ekwekọrịtara. Ndị a bụ atụmatụ ntụgharị okwu, ọtụtụ n'ime ha enweghị ntọala, na ndị ọzọ enweghị ọdịnaya kpamkpam, ma ọ bụ anaghị anwale ezi uche ọ bụla. Ọzọkwa, dị ka m kwuworo, ihe a nile enweghị uru ọ bụla bara uru. Ndị a bụ mgba nke mmụọ ndị mmadụ na onwe ha, ọ nweghịkwa ihe ọzọ.
A na-eji arụmụka a na-adịghị mkpa na nke na-adịghị mkpa ugbu a na-ebute onye mmegide. Onye ọ bụla nke chọrọ ịkwalite echiche socialist - na-akọwara anyị niile na okpukpe ndị Juu na-abụ onye na-elekọta mmadụ, na onye ọ bụla na-adịghị otú ahụ abụghị onye Juu. Ndị ọzọ bụ́ ndị nwere mmasị n’echiche ndị agha na-egosikwa okpukpe ndị Juu na ndị Juu. Otu a ka ọ dịkwa n'ọchịchị onye kwuo uche ya, ịha nhata, ikekete ọchịchị, nnwere onwe, imeghe, mmanye, ọrụ ebere na obiọma, ikpe ziri ezi nke ọha mmadụ, na ụkpụrụ ndị ọzọ dị elu. Na nkenke, okpukpe ndị Juu bụ ìhè nye ndị Jentaịlụ, mana ọdịdị nke ìhè ahụ enweghị mgbagha na enweghị mkpebi. N'adịghị ka esemokwu ndị ọzọ, nke nwere ike ịbụ ụzọ isi dokwuo anya ma nweekwa uru ụfọdụ na ya, esemokwu banyere njirimara ndị Juu bụ n'ụkpụrụ a na-edozighị na ọ dịghị mkpa n'ụzọ ọ bụla.
Otu ihe doro anya n'ụzọ ezi uche dị na ya: ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ndepụta nke ụkpụrụ ndị a (socialism, militarism, socialism, nhatanha, nnwere onwe, wdg), ma ọ bụ uru ọ bụla ọzọ, nwere ike ịbụ ihe dị mkpa, dị mkpa ma ọ bụ zuru oke na nkọwa nke a. njirimara ndị Juu. Onye ọ bụla nke kwere na nke ọ bụla n'ime ụkpụrụ ndị a ma ọ bụ n'ime ihe ọ bụla n'ime ha nwere ike ịbụ onye mba ọzọ mara mma maka echiche niile na enweghị mgbagha. Enweghị ihe mgbochi ịbụ onye mba na-elekọta mmadụ, na-akwado nha anya ma ọ bụ nnwere onwe, onye agha ma ọ bụ na ọ bụghị. Ya mere, ihe ndị a niile abụghị ihe dị mkpa maka njirimara ndị Juu, ọ bụrụgodị na ihe a na-apụghị ikweta ekweta mere (ma atụla egwu, ọ ga-abụ na ọ gaghị eme) na mmadụ ga-enwe ike igosi site na omenala na isi mmalite ndị Juu na otu n'ime ihe ndị a bụ n'ezie akụkụ nke ndị Juu. mmemme nke njirimara a.
njirimara ndị Juu n'oge anyị
Nkwubi okwu bụ na arụmụka banyere njirimara mba bụ ihe efu na ihe efu. Dịka m kwuburu, otu ahụ ka ọ dịkwa n'ihe gbasara njirimara okpukpere chi. Onye ọ bụla nke nne Juu mụrụ ma ọ bụ tụgharịrị nke ọma ga-edebe iwu nke Torah na okwu ndị amamihe ma ghara ime mmebi iwu. ọ bụ ya. Nkọwa nke mmadụ, njirimara ya, na akwụkwọ nri ndị ọzọ, bụ ihe gbasara onwe ya, ma bụrụ nke uche, metaphysical, omenala, ma ọ bụ ikekwe ọbụna amorphous (nke a na-apụghị ịkọwapụta) amorphous. Ohere niile nwere ike ịdị mma, yabụ na ọ nweghị uru ịkọrọ ha.
Ka anyị tụlee ihe nwere ike isi n'okwu dị otú ahụ pụta? Na mmadụ ga-enwe afọ ojuju na ọ bụ ezigbo onye Juu? Inwe ahụ nke ọma bụ ihe gbasara ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ. Mkparịta ụka gbasara njirimara n'echiche bara uru bụ ọmụmụ ihe efu na nke efu, ya mere ọ dịghị mkpa. Ọ bụrụ na e nyere ihe pụtara ìhè nke anyị nwere mmasị n'ịkọwa njirimara, mgbe ahụ, ọ ga-ekwe omume (ikekwe) ikwurịta ajụjụ ndị dị mkpa gbasara ya. Mana ọ bụrụhaala na ọ bụ mkparịta ụka n'ozuzu, onye ọ bụla ga-akọwapụta okpukpe ndị Juu dịka ha chọrọ. Ọbụna ma ọ bụrụ na otu onye ziri ezi na nke ọzọ na-ezighị ezi, ajụjụ a ekwesịghị ịmasị onye ọ bụla, ma e wezụga ndị na-eme nchọpụta agụmakwụkwọ ole na ole na-ebi ndụ site na nyocha nke semantic dị otú ahụ. N'aka nke ọzọ, ònye ka m ga-etinye aka na mgbalị a dị egwu na nke efu? Sisyphus bụkwa akụkụ nke njirimara omenala anyị…
 Eldad Beck si Germany, YNET, 1.2.2014.
 Usoro ịwepụta ụwa na-ebulite okwu gbasara njirimara okpukperechi (ọ pụtara Protestant, Muslim, ma ọ bụ Katọlik, nke ụwa?).
 Ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu banyere nkọwa, mgbe ahụ, ọdịdị nke mitzvos na ajụjụ na mkpali maka ememe ha dị ezigbo mkpa. Ọbụna ma ọ bụrụ na iwu chọrọ omume omume, o yighị ka ọ ga-akọwa okpukpe ndị Juu na nke a ebe ọ bụ na ọ bụ ihe niile n'ụwa. Ọbụna mitzvot dị ka mmezi nke Eretz Israel, nke na-abụghị nke omume omume, enweghị ike ịkọwapụta okpukpe ndị Juu, ebe ọ dịkwa na ndị na-akọwaghị onwe ha dị ka akụkụ nke okpukpe ndị Juu, n'ihi na n'ọtụtụ ọnọdụ mkpali. n’ihi na ịdị adị ha si n’otu ebe pụta.
 Ọ bụ ezie na ntughari bụkwa usoro nke n'onwe ya na-arụrịta ụka dị ka ọtụtụ okwu halakhic ndị ọzọ, ọ zuru ezu maka mkpa anyị.
 Nke a akwụsịghị ịsụgharị akwụkwọ ahụ n'asụsụ iri abụọ na inweta ihe nrite gburugburu ụwa.
 Lee, na-ehota akwụkwọ ozi Eldad Beck nke e hotara n'elu.
 N'ihe kacha mma nke m chetara, onye isi ala mgbe ahụ, Haim Herzog, na nzaghachi ya na okwu oke bekee, yana ọtụtụ ndị ọzọ ruo taa, kwuru banyere "nkọwa" a. Onye ọ bụla nwere ntakịrị nghọta na-atụ n'anya maka ihe a na-adọrọ mmasị. Anyị chọrọ ịkọwa echiche ndị Juu, ma mee ya n'ụzọ ndị a: ihe niile nwere ike idowe n'ọnọdụ X n'ụdị na-esonụ: "X onye chere X" na nkọwa ahụ pụta bụ eziokwu, bụ onye Juu. Dị ka nkọwa a si dị, ihe ọ bụla e kere eke maara onwe ya nke na-adịghị agha ụgha nye onwe ya bụ onye Juu (lelee otu ntinye).
 O kwere omume na anyị ga-aghọtakwa nkwubi okwu Gideon Ofrat n'elu. Ikekwe ọ naghị ekwu na ọ dịghị ihe dị ka nkà, ma na-ekwubi na mkparịta ụka banyere ya adịghị mkpa na enweghị mkpụrụ.
Echiche 3 na "Njirimara ndị Juu n'oge Anyị na n'ozuzu"
H. Bayer 22 - 04/2018/21 na 59:XNUMX
Ndị rabaị a ga-enwe ike ịkọwa ndetu 7 ọzọ?
H. Bayer 23 - 04/2018/07 na 06:XNUMX
Mgbe ị kọwara onye Juu dị ka onye na-eche na onwe ya dị ka onye Juu, i kwughị ihe ọ bụla. Okwu ndị e ji mee ihe na nkọwa kwesịrị ịma nke ọma tupu na enweghị ya. Ya mere, ọ bụrụ na anyị chere na okwu Juu bụ X na nkọwa ya kwesịrị ime ka ọ dokwuo anya, yabụ na ihe ị kwuru na nkọwa dị otú ahụ bụ na onye Juu bụ X nke chere na ọ bụ X.
19 Tammuz 07 - 2019/10/26 na XNUMX:XNUMX
Ekwetaghị m. Iji chọpụta ihe na-akọwaghị ma ọlị. Na Kabbalah e nwere nkọwa nke ma Chineke na sparkle wdg. Ọ bụrụhaala na mmadụ na-ekwu okwu na Torah na-edoghị anya mgbe ahụ ọ bụ nkọwa enweghị isi. Enwere nkọwa doro anya. Ma agaghị m eweta ya ugbu a. Ihe na-enweghị nkọwa pụtara na ọ dịghị ụkpụrụ na-ejikọta onye ọ bụla iji chọpụta otu. Ya mere ọ dịghị otu njirimara maka mmadụ niile. Enwere nafkamina maka njirimara ndị Juu. N'ihi na n'ezie na m na-ahụ onwe m dị ka onye Juu na anaghị m enwe obi abụọ na onye ọzọ dị ka onye Juu. Na nke a, m na-ejikọta onwe m na ya na mgbe m na-eme ihe ụfọdụ na m na-akọwa ya dị ka omume ndị Juu, mgbe ahụ, m na-ekwu onye Juu, akụkụ nke ụkpụrụ ndị Juu ya bụ ime ihe ndị a. Nke na-abụghị eziokwu n'ihi na pusi dị ka ihe atụ na-akpa àgwà obi umeala na-enweghị so na okpukpe obi umeala agbanyeghị na mmadụ nwere ike na-akpa àgwà ka nkịta na-eri nri n'ala n'ihi ọchịchọ iji nweta ihe ọzọ nzube. Ọ bụ ezie na ụzọ ọ họọrọ megidere okike.
Ọ bụrụ na onye Juu na-ele onwe ya anya dị ka onye Juu ọhụrụ wee kewapụ onwe ya na njirimara ndị Juu, nke ọzọ, dịka ọmụmaatụ, agaghị eji Iwu nloghachi. Karịsịa ma ọ bụrụ na a na-eme ya na ụlọ ọrụ steeti dịka obodo ndị Juu. Ma mgbe e kewara njikọ ahụ, a na-akpọ ya mmekọahụ na dịka iwu ndị Juu si dị, a ga-eme ka ọ nwụọ na mberede.
Ya mere, ọ bụrụ na anyị niile na-ahụ onwe anyị dị ka ndị Juu. N'agbanyeghi ihe di iche iche, o nwere otu ihe anyi nile nwekọrọ na ya bu ihe na-eme ka anyi ghara inyefe nkowa ndi Ju. Na ijikọ onwe anyị na-ejikọta na ndị Juu niile nọ n'ụwa. Nke a abụghị nkọwa iwu n'ihi na ọbụna ndị Juu na-aghọtaghị iwu na-ekweta. Nke a bụ nkọwa nke ụzọ ndụ nke ndị Juu niile chọrọ. Nke a bụ nkọwa nke nwere nkwupụta na ndụ ya dị ka onye Juu ọ bụrụgodị na ọ bụ naanị mgbe ọ na-achọ ịghọta nkọwa a. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ etiti uru. Ma n'ịgbalị ịghọta ya ma ọ bụ n'ịgbalị ileghara ya anya site n'ike. N'ihi na nke ahụ bụkwa àgwà. N'aka nke ọzọ, uru nke ọ na-enweghị mmekọrịta adịghị agọnahụ ihe ọ na-echeghị echiche ma ọlị ma ọ dịghị ejikwa esemokwu.
mikyab Gbanye Nbili na ọdịda nke Bennett na ihe ha pụtara (Osisi 486)
Ndị na-ege ntị Gbanye Nbili na ọdịda nke Bennett na ihe ha pụtara (Osisi 486)
Na Ndagwurugwu Ikwa ákwá Gbanye Nbili na ọdịda nke Bennett na ihe ha pụtara (Osisi 486)